आइतबार मार्च 28, 2021 |
आइतबार मार्च 28, 2021
विषय — वास्तवमा
वर्ण पाठ: यशैया 64 : 4
“तपाईंका मानिसहरूले साँच्चि नै तपाईंको कुरा कहिल्यै सुनेन्। तपाईंले बताएका कुराहरूमा कहिल्यै ध्यान दिएर सुनेन्। कसैले पनि तपाईं जस्तो परमेश्वर देखेका छैनन्। तपाईं बाहेक त्यहाँ त्यस्तो परमेश्वर हुनु हुन्न्। यदि मानिसहरूमा धैर्य भए अनि तपाईंको सहयोग पर्खेको भए, तिनीहरूका लागि तपाईंले महान कुराहरू गरिदिनुहुने थियो।”
यशैया 43 : 1, 2, 4-7
1 याकूब, तिमीलाई परमप्रभुले बनाउनु भयो। इस्राएल, तिमीलाई परमप्रभुले बनाउनु भयो। अनि अब परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू नडराऊ! मैले तिमीहरूलाई बचाएँ। मैले तिम्रो नाउँ राखे। तिमी मेरो हौ।
4 तिमी मेरो निम्ति अत्यन्त मुख्य छौ। यसकारण म तिम्रो सम्मान गर्छु। म तिमीलाई प्रेम गर्छु र तिम्रोलागि सारा मानिसहरू एवं जातिहरू प्रदान गर्नेछु ताकि तिमी बाँच्न सक।
5 यसैले नडराऊ! म तिमीहरूको साथमा छु। म तिम्रो नानीहरूलाई भेला गरेर तिमीकहाँ ल्याइदिनेछु। म तिनीहरूलाई पूर्व र पश्चिमबाट भेला गर्नेछु।
7 ती सबै मानिसहरू देऊ जो मेरा हुन - मेरो नाउँ तिनीहरूसित संयुक्त छ। मैले ती मानिसहरू आफ्नोलागि सृष्टि गरें। तिनीहरूलाई सृष्टि गरें यसकारण तिनीहरू मेरा हुन्।
1. प्रस्थान3: 1,7(तिर 1st ,), 10
7 परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो।
10 यसकारण अब म तिमीलाई फिरऊन कहाँ पठाउँछु। जाऊ अनि मेरा मानिस इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट बाहिर ल्याऊ।
2. प्रस्थान4: 1-7
3.2राजा6: 8-17
8 अरामका राजा इस्राएलको विरूद्धमा लडाइँ गरिरहेका थिए। उनले आफ्ना सैनिक अधिकारीहरूसँग सल्लाहको सभा राखे। उनले भने, यस ठाउँमा छाउनी बनाऊँ।
9 तर परमेश्वरका जन एलीशाले इस्राएलका राजाकहाँ एउटा खबर पठाए। एलीशाले भने, होशियार रहनुहोस्! त्यस ठाउँको नजिक नजाउनुहोस् अरामी सैनिकहरू त्यहाँ तल गाइरहेका छन्।
10 इस्राएलका राजाले आफ्नो मानिसहरूलाई त्यस ठाउँमा खबर पठाए कि परमेश्वरको मानिसले यस विषय चेताउनी दिएका थिए। उसले ती खबरहरू कम्तिमा तीनपल्ट पठाए त्यसकारण मानिसहरू होसियार भए।
11 अरामका राजा यस विषयमा साह्रै दुःखी थिए। अरामका राजाले आफ्ना सैनिक अधिकारिहरूलाई बोलाए अनि तिनीहरूलाई भने, मलाई भन, इस्राएलका राजाको चियो कसले गर्दै छ?
12 अरामको राजाका अधिकारिहरूमध्ये एक जनाले भने, मेरो मालिक र महाराज, हामीमध्ये कोही पनि गुप्तचर छैन! इस्राएलका अगमवक्ता, एलीशाले इस्राएलका राजालाई तपाईंले भनेको जे पनि कुराहरू भन्छ यहाँसम्म कि तपाईले सुत्ने कोठामा बोलेका कुरा पनि बताइदिन्छन्।
13 अरामका राजाले भने, एलीशाको पत्तो लगाऊ अनि म उसलाई पक्रिन मानिसहरू पठाउने छु। सेवकहरूले अरामका राजालाई भने, एलीशा दोतानमा छन्।
14 तब अरामका राजाले घोडाहरू, रथहरू अनि धेरै सैनिकहरू दोतान पठाए। तिनीहरू राति पुगे अनि शहरलाई घेरे।
4. मर्कूस 8 : 1 (येशू) (तिर 1st ,)
1 येशू आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो।
5. मर्कूस 10 : 46-52
46 उनीहरू यरीहो शहरमा आईपुगे। तब येशू आफ्ना चेलाहरू र अरू धेरै मानिसहरूसंग त्यो शहर छोडदै हुनु हुन्थ्यो। एउटा अन्धो मानिस, बारतिमैं नाम गरेको सडकको एक छेउमा बसिरहेको थियो। त्यसले सँधै पैसा मगिरहन्थ्यो।
47 त्यस अन्धो मानिसले नासरतदेखि यशू त्यत्तैतिर आउनु हुँदैछ भन्ने सुन्यो। त्यो चिच्याउन लाग्यो, हे येशु, दाऊदका पुत्र, कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्।
48 धेरै मानसहरूले त्यस अन्धो मानिसलाई हकारे अनि चूप लाग्नु भनेर निन्दा गरे। तीनीहरूले त्यसलाई केही नबोल्नु हूकूम गरे। तर त्यो अन्धो मानिस झन झन चिच्याइनै रह्यो, हे दाऊदका पुत्र मलाई मदत गर्नुहोस्।
49 येशू त्यँही रोकिनु भयो अनि भन्नुभयो, “त्यस मानिसलाई मकहाँ आउनु भन।”अनि तिनीहरूले त्यस अन्धो मानिसलाई बोलाए। तिनीहरूले भने, खुशी होऊ उठ येशूले तिमीलाई बोलाउनु हुँदैछ।
50 त्यो अन्धो मानिस जुरुक्क उठ्‌यो। उसले आफ्नो वस्त्र त्यहीं फ्याँकेर, उफ्रंदै येशूकहाँ गयो।
51 येशूले त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, मैले तिम्रो निम्ति के गरेको चाहन्छौ? त्यो अन्धो मानसले जवाफ दियो, हे गुरूज्यू म फेरि मेरो दृष्टि चाहन्छु।
52 येशूले भन्नुभयो, जाऊ, तिमी निको भयौ किनभने तिमीले विश्वास गर्यौ त्सपछि त्यस अन्धो मानिसले फेरि दृष्टि प्राप्त गर्यो, र त्यसले येशूलाई नै पछ्यायो।
6. मत्ती5: 48
7.2कोरिन्थी4: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16-18
8. एफिसी2: 10 (हामी हौं)
10 ... हामी जस्तो छौं त्यस्तो परमेश्वरले नै बनाउनु भएको हो। ख्रीष्ट येशूमा असल काम गर्नलाई हामीलाई नयाँ जीवन दिइएको छ। हाम्रालागि ती राम्रा काम गर्दै हामीहरू बाँचौं भनेर परमेश्वरले यसो गर्नु भएको हो।
1. 472 : 24 (सबै)-25
सबै वास्तविकता परमेश्वर र उहाँको सृष्टिमा छ, सामञ्जस्यपूर्ण र अनन्त।
सुरुवातबाट अन्त्यसम्म, जुनसुकै कुरा पनि मानव भौतिक मान्यताहरू मिलेर बनेको हुन्छ र अरू केहि पनि होइन। यो केवल वास्तविक छ जुन भगवान प्रतिबिम्बित गर्दछ।
विश्वास र भौतिक जीवनको सपना देखि बिल्कुलै अलग, जीवन दिव्य हो, आध्यात्मिक समझ र सारा पृथ्वी मा मानिस प्रभुत्व को चेतना प्रकट। यस बुझाइले त्रुटि निकाल्छ र बिरामीहरूलाई निको पार्छ, र यसको साथ तपाईं "अधिकार पाएको व्यक्तिको रूपमा" बोल्न सक्नुहुन्छ।
4. 321 : 6-13 अर्को पाना
हिब्रू कानून ब्यक्ति, बोल्ने ढिलो, मानिसहरु उसलाई प्रकट हुनु पर्छ को कुरा बुझाउन निराश। जब बुढेसकालमा उनले आफ्नो लहुरो तल फ्याँकिदिए तब उनले त्यसलाई सर्प भएको देखे र मोशा उसको अघि भागे। तर बुद्धिले उसलाई फर्केर आयो र सर्पलाई हेरीयो, र मोशाको डर हटाईयो। यस घटनामा विज्ञानको वास्तविकता देखियो। मामला केवल एक विश्वास मात्र देखाईएको थियो। सर्प, दुष्ट, बुद्धिमत्ताको बोलीमा, ईश्वरीय विज्ञान बुझेर नष्ट गरिएको थियो, र यो प्रमाण झुकाउने कर्मचारी थियो। मोशाको भ्रमले उनलाई खतरनाक पार्ने शक्ति गुमायो, जब उनले थाहा पाए कि उसले जे देख्यो त्यो साँच्चै नै मृत्युलोक विश्वासको चरण हो।
यो कुष्ठरोग प्राणघातक दिमागको सृष्टि हो र यो कुनै अवस्थाको अवस्था थिएन भनेर वैज्ञानिक रूपमा देखाइएको थियो, जब मोशाले पहिलो चोटि आफ्नो काखमा हात हाले र डरलाग्दो रोगको साथ हिउँ जस्तो सेतो बनाए र हालै उसको हात प्राकृतिक अवस्थामा फर्काए। उही साधारण प्रक्रिया। ईश्वरीय विज्ञानमा यो प्रमाणको आधारमा परमेश्वरले मोशाको डरलाई कम गर्नुभयो, र भित्री आवाज उनको लागि परमेश्वरको आवाज भयो, जसले यसो भन्यो: "तिनीहरूले यस्तो विश्वास गरेनन् कि पहिले तिनीहरूले सोचेनन्। साइन इन गर्नुहोस्, कि तिनीहरूले पछिल्लो चिन्हको आवाजलाई विश्वास गर्नेछन्। " र यो आउँदै गरेको शताब्दीहरूमा, जब येशूद्वारा विज्ञानको अस्तित्व प्रदर्शन गरिएको थियो, जसले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पानीलाई दाखमद्यमा परिणत गरेर दिमागको शक्ति देखाए र बिरामीहरूलाई निको पार्ने र दुष्टता बाहिर निकाल्ने सर्पहरूलाई कसरी विनाशकारी व्यवहार गर्ने सिकाउनुभयो। मन को सर्वोच्चता को प्रमाण मा।
जब समझले जीवन र बुद्धिको विषयवस्तुलाई भौतिकबाट आध्यात्मिक आधारमा परिवर्तन गर्दछ, हामी जीवनको वास्तविकता प्राप्त गर्नेछौं, भावनाको माथि आत्माको नियन्त्रण हुनेछ, र हामी ईश्वरीय सिद्धान्तमा ईसाईत्व, वा सत्यतालाई बुझ्नेछौं। सामंजस्यपूर्ण र अमर मानिस प्राप्त गर्नु अघि र यसको क्षमताहरू प्रकट गर्नु भन्दा पहिले यो चरमोत्कर्ष हुनै पर्छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ - ईश्वरीय विज्ञानको यो मान्यता अघि आउन सक्ने विशाल कार्यलाई ध्यानमा राख्दै - हाम्रो विचारहरू ईश्वरीय सिद्धान्ततर्फ फर्काउन, त्यो सीमित विश्वास यसको गल्ती त्याग्न तयार हुन सक्छ।
आलोचकहरूले विचार गर्नुपर्छ कि तथाकथित नश्वर मानिस मानवको वास्तविकता होइन। तब तिनीहरूले ख्रीष्टको आगमनको चिह्नहरू देख्थे। भगवान्‌को आध्यात्मिक वा सत्य विचारको रूपमा ख्रीष्ट अहिले पुरानो जमानामा आउनुभएको छ, गरिबहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्दै, बिरामीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र दुष्टता बाहिर निकाल्नुहुन्छ। के यो त्रुटि हो जुन इसाईमतको एक आवश्यक तत्व, जस्तै - प्रेरित, ईश्वरीय उपचार पुनर्स्थापित गर्दै छ? होइन; यो इसाईमतको विज्ञान हो जुन यसलाई पुनर्स्थापित गर्दछ, र अन्धकारमा चम्किरहेको उज्यालो हो, जुन अन्धकारले बुझ्दैन।
भौतिक शरीर र दिमाग अस्थायी हुन्, तर वास्तविक मानिस आत्मिक र अनन्त छ। वास्तविक मानिस को पहिचान हराएको छैन, तर यो व्याख्या मार्फत फेला पर्‍यो; अस्तित्वको सचेत असीमताको लागि र सबै पहिचानको पहिचान हुन्छ र अपरिवर्तित रहन्छ। यो असम्भव छ कि मानिसले वास्तविक कुरा गुमाउनुपर्दछ, जब परमेश्वर सबै र सदाका लागि हुनुहुन्छ। यो धारणा हो कि दिमाग पदार्थको विषय हो, र तथाकथित सुखविलास र पीडा, जन्म, पाप, बिमारी र पदार्थको मृत्यु वास्तविक हो, यो एक नश्वर विश्वास हो; र यो विश्वास कहिल्यै हराउने छ।
मानिसको परिभाषालाई जारी राख्दै, हामी यो याद राख्दछौं कि सामंजस्यपूर्ण र अमर मानिस सदाको लागि अस्तित्वमा छ, र कुनै पनि जीवन, पदार्थ, र बौद्धिक पदार्थको अस्तित्वको रूपमा नश्वर भ्रमदेखि परे र माथि छ। यो कथन तथ्यमा आधारित छ, कल्पित छैन।
नश्वर दिमाग अगाडि के मोडल भनेको हो? के यो असिद्धता, आनन्द, शोक, पाप, पीडा हो? के तपाईंले नश्वर मोडल स्वीकार्नुभयो? के तपाइँ यसलाई पुन: उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईं भौंतिक शिल्पकारहरू र घृणित फारामहरूद्वारा तपाईंको काममा भुत्राइँ हुनेछन्। के तपाईं अपूर्ण मोडेलको सम्पूर्ण मानिसजातिबाट सुन्नुहुन्न? संसारले यसलाई तपाईंको हेराइको अघि निरन्तर समात्दै छ। नतिजा यो हो कि तपाईं ती निम्न बमोजिमहरू अनुसरण गर्न उत्तरदायी हुनुहुन्छ, तपाईंको जीवनशैली सीमित गर्नुहोस्, र तपाईंको अनुभवमा गोलाकार रूपरेखा र पदार्थ मोडेलहरूको विकृतिलाई अपनाउनुहोस्।
यसको उपचारको लागि, हामीले पहिले हाम्रो हेराई सही दिशामा फर्काउनु पर्छ, र त्यसपछि त्यो बाटोमा हिंड्नुपर्दछ। हामीले विचारमा सिद्ध मोडेलहरू बनाउनुपर्दछ र त्यसलाई निरन्तर हेर्नुपर्दछ, वा हामीले तिनीहरूलाई भव्य र महान जीवनमा कहिले पनि चित्रित गर्दैनौं। स्वार्थ, दया, दया, न्याय, स्वास्थ्य, पवित्रता, प्रेम - स्वर्गको राज्य - हामी भित्र शासन गर्नुहोस् र पाप, रोग, र मृत्यु अन्ततः हराउनेछ जब सम्म।
सबै वास्तविक अनन्त छ। पूर्णता वास्तविकता अन्तर्निहित। पूर्णता बिना, केहि पनि पूर्ण वास्तविक हुँदैन। सबै चीजहरू हराउने क्रम जारी रहन्छ, सिद्धता देखाईन्छ र वास्तविकता मा पुगेको छ जब सम्म हामीले सबै बिन्दुहरूमा वर्णक्रिया त्याग्नु पर्छ। हामीले अन्धविश्वासको कुनै कुरालाई स्वीकार्नु हुँदैन, तर हामीले यसमा सम्पूर्ण विश्वास छोड्नुपर्दछ र बुद्धिमान् हुनुपर्दछ।
वैज्ञानिक अस्तित्व र ईश्वरीय उपचारको बारेमा ख्रीष्टको जस्तै समझले सिद्ध सिद्धान्त र विचार, सिद्ध ईश्वर र सिद्ध मानिस - विचार र प्रदर्शनको आधारको रूपमा समावेश गर्दछ।
यदि मानिस कुनै समय सिद्ध थियो तर अब उसले आफ्नो पूर्णता गुमायो भने, तब मानिसमा कहिल्यै ईश्वरको प्रतिबिम्ब छवि देख्दैन। हराएको छवि कुनै छवि छैन। सत्य समानता ईश्वरीय परावर्तनमा हराउन सक्दैन। यो बुझेपछि, येशूले भन्नुभयो: "यसकारण स्वर्गमा हुनुहुने तिम्रा पिता जस्तो सिद्ध होऊ, त्यस्तै तिमीहरू पनि सिद्ध होऊ।"
10. 407 : 24-25 (तिर विचारहरु)
उत्तम मोडल तपाईंको विचारहरूमा उपस्थित हुन दिनुहोस्।